N'Golo Kante: Oo Ka Hadlay Kulanka Chelsea Ee Liverpool La Ciyaaridoonta Iyo Rajadiisa
Home Falanqeynta Kulamada N’Golo Kante: oo ka hadlay Kulanka Chelsea ee Liverpool la ciyaaridoonta iyo...
N’Golo Kante: oo ka hadlay Kulanka Chelsea ee Liverpool la ciyaaridoonta iyo rajadiisa
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea N’Golo Kante ayaa ku adkeysanaya in kooxdiisu ‘ay u aadi doonto guusha Anfield iyadoo Blues ay dooneyso inay natiijo fiican ka hesho safarka ay ku tagayaan Liverpool habeenka Khamiista.
Kooxda Jurgen Klopp ayaa laga badiyay mid kasta oo ka mid ah afartii kulan ee ugu danbeysay ee ay ku ciyaareen garoonkooda Premier League, iyagoo horay u ahaa guuldarro la’aan horyaalka ee Anfield tan iyo bishii Abriil 2017, laakiin waxay ku soo laabteen wadada guusha ka dib markii ay 2-0 kaga badiyeen Sheffield United Axadii. .
Guushii ay ka gaareen Blades waxay arkeen Reds oo hal dhibic ka hooseysa booska shanaad ee Chelsea , laakiin Kante ayaa ku adkeysanaya in Blues ay aadi doonto Merseyside iyagoo raadinaya inay helaan seddexda dhibcood.
“Waa ciyaar muhiim noo ah, aad ayaan ugu dhow nahay horyaalka. Waxaan halkaas u aadnaa guul. Waan ognahay inaysan sahlanaan doonin laakiin waxaan ku soconaa rajo, waana hubaa inaan heli karno natiijo fiican oo ka timid Anfield, ”ayuu ciyaaryahanka reer France u sheegay Sky Sports News .
“Man Utd (Manchester United), Leicester [City] iyo West Ham [United] waa naga horeeyaan, laakiin wali waxaan heysanaa kulamo badan oo aan dheelno, hadii aan sifiican u shaqeyneyno markaa waxaan awood u leenahay inaan booskaan helno.
Waxaan u baahanahay inaan u dagaalano, si aan ugu diyaar garowno, iyo inaan sameyno wax walba oo aan ku heli karno afarta sare.
Guul ay gaarto Chelsea ayaa ka dhigeysa in Blues ay afar dhibcood ka sarreyso Liverpool, halka guul ay gaarto Reds ay ka dhigeyso inay ka sarre maraan kooxda Thomas Tuchel isla markaana ay galaan afarta sarre, inkastoo West Ham United ay markaas kulan u harsanyahay.
Previous articleAndreas Pereira oo ku laabanaya Manchester United maadaama Lazio aysan awoodin iibsigiisa joogtada
Next articleMikel Arteta oo ka hadlay Shaqada tababarnimo ee kooxda barcelona.